Goolasha.net | Archive | Dagmooyinka | 2
Home » Archives by category » Dagmooyinka (Page 2)
DEG DEG: Degmada Wadajir oo iskaga hartay tartanka Degmooyinka ee Gobolka Banadir 2016-17.
Kulan xiiso badan ayaa galabta ka dhacay garoonka Banadir Stadium kaa uu u dhaxeeyay degmooyinka kala ah Wadajir iyo Hilwa kulankas oo ku soo dhamaaday 3-0 ay guusha ku raacday degmada Hilwa. Maalintii shaley aye aheyd markii degmada Boondheere iskaga hartay tartanka degmoyinka kadib markii ay guul daro kala kulantay degmada Waabari kulan ku soo […]
kulankii ugu yaabka badana oo shaley ka dhacay garoonka Banadir Stadium kaa uu u dhaxeeyay degmooyinka kala ah Waabari iyo Boondheere.
Kulan ka tirsan tartanka Degmooyinka Gobolka Banadir ayaa shaley ka dhacay garoonka Banadir Stadium kaa uu u dhaxeeyay degmooyinka kala ah Waabari iyo Boondheere. Ciyaarta ayaa waqtigii loogu talagalay ku soo dhamaaday bar baro 2-2,ayadoo ay xusid mudantahay in daqiiqadihii dheeriga ahaa ee ciyaarta lagu daray tii ugu danbeesay gool laga dhaliyay degmada Waabari. […]
Kaxda iyo shibis oo galabta wada ciyaare doona kulan dhimsho ah.
kulan ka tirsan tartanka dagmooyinka Gobolka Banadir ayaa galabta lago ciyaare doona garoonka Banadir Stadium ee degmada Cabdicasiis kaa uu u dhaxeeya dagmooyinka kala ah Kaxda iyo Shibis waana kulan kala bax ah. Tartanka degmooyinka ayaa mudo hal isbuuc ah hakad ku jiray kadib geeri ku timid allaah u naxariisto gudoomiyaha waxda garsoorka mudane Diraac, […]
DAAWO: Wararkii Ugu Dambeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda,maanta oo Talaado ah
kulan wacan saaxibyaal,waxaa halkaan idin kugu soo gudbin doonaa,wararkii ugu danbeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaaryahanada. HALKAAN HOOSE KA DAAWO MUUQAALKA WARARKA
DAAWO: Wararkii Ugu Dambeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda,maanta oo Axad ah
kulan wacan saaxibyaal,waxa halkaan idin kugu soo gudbin doonaa wararkii ugu danbeeyay dhanka suuqa kala iibsiga ciyaaryahanada. maanta,waxaa inoo warami doono wariye Najiib Aadan Najiib HALKAAN HOOSE KA DAWO MUUQAALKA WARARKA
Kaxda iyo Shibis oo galabta kulan dhimasho ah wada ciyaare doonan.
kulan ka tirsan tartanka dagmooyinka Gobolka Banadir ayaa galabta lago ciyaare doona garoonka Banadir Stadium ee dagmada Cabdicasiis kaa uu u dhaxeeya dagmooyinka kala ah Kaxda iyo Shibis waana kulan kala bax ah. labadan dagmo ayaa galabta wada ciyaare doona kulan dhimsho ah madaama ay dagmooyinka laga rabo hal dagmo shibis waxeey leedhahay 6-dhibcood halka […]
Natiijooyinka galabta kasoo kala baxay tartanka dagmooyinka.
kulamo ka tirsan tartanka dagmooyinka ee Gobolka Banadir ayaa galabta lagu kala ciyaaray garoomada kala duwan Banadir Stadium iyo Jaamacadaha waxaan food is daray dagmooyinka kala ah Xamar Jajab vs shangaani iyo Shibis iyo Boondheere. Garoonka Banadir Stadium ayaa kuwada ciyaareyn dagmooyinka kala ah Shangaani iyo Xamar Jajab ciyaartas ayaa aheyd mid lala yaabo labadan […]
Falanqeynta dagmooyinka kala ah Cabdicasiis iyo Wadajir.
kulan ka tirsan tartanka dagmooyinka Gobolka Benadir ayaa galabta ka dhici doona garoonka Jaamacadaha ee Dagmada Hodan kaa uu u dhaxeeya kooxaha Wadajir iyo Cabdicasiis. Dagmada Wadajir kulankii ugu dambeyay waxeey bar baro la soo gashay dagmada Kaaraan ciyaar ku soo dhamaatay 1-1 ay ku heshiiyen. dhanka kale dagmada Cabdicasiis kulanki ugu dambeyay waxeey guul […]
Maxeey ku kala baxeyn dagmooyinka kala ah Hodan vs Dayniile iyo Waabari vs Yaaqshid.
dagmooyinka Dayniile iyo Hodan ayaa shaley ku kala baxeyn bar baro 2-2- kulan xiiso badan oo shaley ka dhacay garoonka Jaamacadaha ee Dagmada Hodan ciyaar qeyb ka aheyd tartanka dagmoomyinka Gobolka Banadir. dhanka kale garoonka Banadir Stadium ayaa lagu ciyaaray kulan xiiso badan kaa u dhaxeeyay dagmooyinka kala ah Waabari iyo Yaaqshid kulankas oo ku […]
Falanqeynta kulanka u dhaxeya dagmooyinka kala ah Waabari iyo Yaaqshid.
kulan xiiso badan ayaa galabta ka dhici doona garoonka Banadir Stadium ee dagmada Cabdicasiis kaa u dhaxeeyo dagmooyinka kala ah Waabari iyo Yaaqshid kulan ka tirsan tartanka dagmooyinka ee gobolkada Banadir sanadkan 2016-17. dagmada Yaaqshid kulankii ugu dambeyay waxeey guul daro xanuun badan kala soo kulantay dagmada Hodan. dhanka kale dagmada Waabari ciyaartii ugu dambeysay […]